Music Khabar योजनाको महत्वाकांक्षी भिडियो ‘म त बस्नै नसक्ने’लाई ३ दिनमा १ लाख बढी भिवर्स !!! - Music Khabar
Home » Image slider » योजनाको महत्वाकांक्षी भिडियो ‘म त बस्नै नसक्ने’लाई ३ दिनमा १ लाख बढी भिवर्स !!!
योजनाको महत्वाकांक्षी भिडियो ‘म त बस्नै नसक्ने’लाई ३ दिनमा १ लाख बढी भिवर्स !!!
चैत्र १, काठमाडौं । गायन एवं सञ्चारकर्म उतिकै सक्रिय र उतिकै नाम कमाउन सफल योजना पुरीले आफ्नै युट्युब च्यानलमार्फत ‘म त बस्नै नसक्ने…’ बोलको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरेकी छिन् । गायिका पुरीको दोस्रो एल्बम ‘समर्पण’मा सो गीत समेटिएको छ । उक्त गीतको म्युजिक भिडियो हेर्नेको संख्या ३ दिनमा १ लाख बढीले हेरिसकेका छन् । भिडियो सार्वजनिक भएको ३ दिनमा, यो समाचार तयार पार्दाको समयसम्ममा गीतको भिडियोलाई १ लाख ८ हजार ९०० दर्शकले हेरिसकेका छन् ।
यस गीतमा १० ओटा भन्दा बढी कभर भिडियो बनेर आएमा त्यहाँबाट एउटा भिडियो उत्कृष्ट एक भिडीयो मेकरलाई योजनाकै नयाँ गीतमा भिडियो खेल्ने अवसर दिइने योजनाको योजना रहेको बताइन् । यस गीतलाई रार्जिव शाहले संगीत र संगीत समंयोजन गरेका छन् भने शब्द गणेश सुबेदीको शब्द रहेको छ ।
भिडियोमा के.के. अधिकारीसगँ जोडीरुपमा देखीएकी गायिका योजना पुरीले क्यामारामा जोडी भएर काम गरे पनि हामी साथी हौ नाम नजोडिनुहोला सम्म भनेकी छिन् । म्युजिक भिडियो अहिलेका ब्यस्त निर्देशक युवराज वाइवाले गरेका छन भने क्यामेरा अहिलेका जल्दाबल्दा उत्सव दहालले खिचेका हुन् । म्युजिक भिडियोमा अर्को महत्वपुर्ण काम सम्पादन अहिलेका सबैको रोजाइमा परेका एडिटर निशान घिमीरेले गरेका छन् । उक्त म्यूजिक भिडियोबाट आफु निकै नै आशावादी रहेको गायिका योजना पुरीले बताइन् ।
यस्तो छ भिडियो हेर्नुहोस् :